सर्वोच्च अदालतबाट पारित गर्यो, सेनामा कार्यरत महिला-पुरुषलाई यस्तो क’डा नियम ! सैनिकमा चल्यो खैलाबैला – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सर्वोच्च अदालतबाट पारित गर्यो, सेनामा कार्यरत महिला-पुरुषलाई यस्तो क’डा नियम ! सैनिकमा चल्यो खैलाबैला
सर्वोच्च अदालतबाट पारित गर्यो, सेनामा कार्यरत महिला-पुरुषलाई यस्तो क’डा नियम ! सैनिकमा चल्यो खैलाबैला
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सैन्यसेवाभित्र सहमतिमा पनि यौ नस म्पर्क राख्न नपाइने फै’सला सुनाएको छ । सैनिकबीच भएको यौ न प्र क रणमा जं’गी अ’ड्डाले का रबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक वि’वादमा यस्तो फै’सला आएको हो ।
फै’सलाले यौ’न प्र’रणमा मु’छिएका सैनिकविरु’द्ध’को का रबाहीमा सेनाको इन्वायरी बोर्ड, सैनिक विशेष अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई थप बलियो पार्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी यौ नस म्पर्क, यौ नशो षण र ज बर्ज स्ती क रणी आ रोपमा मु’छिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायतका सुविधा खोसिने भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
चण्डीदल गणका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र एक महिला सैनिक कर्मचारीबीच अनुचित यौ न स म्बन्धका कारण पदमु’क्तिको का रबाहीपछि वि’वाद सर्वोच्च पुगेको थियो । उनीहरूलाई जं’गी अ’ड्डाबाट ब’र्खास्तीको का रबाहीपछि सैनिक अधिकृत खड्काले सहमतिमा यौ नस म्पर्क भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रि’ट दिएका थिए ।
यौ न प्र क रणमा मु’छिने सैनिक महिला वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तल्लो तहमा कार्यरत हुन् । मुलुकी ऐन, द ण्ड स जायको १ नं। ले सहमतिमा भएको यौ नस म्पर्कका विषयमा स जायको भा’गीदार नहुने व्यवस्था गरेको भनाइ खड्काको थियो ।
बङ्गलादेशबाट अबको एक महिनाभित्र युरिया मल नेपाल आउने